Isikhokelo sokuqonda iMithetho yeMakhaya
Imithetho ilawula iiKhaya zasekhaya
I-Easiest-and Most Difficult - States for Homeschooling
I-homechooling iye yasemthethweni kuwo onke ama-50 ase-United States ukususela ngo-1993. Ngokutsho kwe-Homeschool Legal Defence Association, imfundo yasekhaya yayingekho mthethweni kumazwe amaninzi ngoku nje ekuqaleni kwee-1980. Ngama-1989, kuphela i-three states, iMichigan, North Dakota, kunye ne-Iowa, isacinga i-homeschooling yolwaphulo-mthetho.
Okuthakazelisayo, kulawo mathathu athi, ezimbini zazo, eMichigan nase-Iowa, zibalulwe namhlanje phakathi kwamazwe kunye nemithetho encinci yemithetho yezindlu zasemakhaya.
Nangona amakhaya asekhaya asemthethweni ngokubanzi kwi-United States, ilizwe ngalinye lijongene nokuqulunqa imithetho yezindlu zasemakhaya, oko kuthetha ukuba oko kufuneka kwenziwe kwimizi yasekhaya kuyahluka ngokuxhomekeka apho ihlala khona intsapho.
Amanye amazwe alawulwa kakhulu, ngelixa abanye bebeka imingcele embalwa kwiintsapho zasekhaya. I-Homeschool yoMthetho woKhuselo wezomthetho igcina isiseko seenkcukacha kwi-homechooling laws kwiminyaka yonke engama-50.
Imiqathango yokwazi Xa Uqwalasela iMithetho yeMakhaya
Kulabo abatsha kwizindlu zasemakhaya, isigama esisetyenziselwa kwimithetho yasekhaya sasingaqhelekanga. Ezinye zeemeko ezisisiseko ofuna ukuyazi ziquka:
Ukubakho ngokunyanzeliso: Oku kubhekisela kumaxesha afunekayo ukuba abantwana babe kwindawo ethile yesikolo. Kwiinkoliso ezininzi ezichaza ixesha elifunekayo lokuya kwabafundi basekhaya, ubuncinci bahlala phakathi kweminyaka emi-5 no-7. Ubuninzi buphakathi kweminyaka eyi-16 no-18.
Isibhengezo (okanye iSaziso) seNjongo : Amanyathelo amaninzi afuna ukuba iintsapho zezindlu zasemakhaya zihambise isaziso sonyaka seenjongo zamakhaya ukuya kwinqanaba lika-or school superintendent. Umxholo wale saziso unokwahluka ngurhulumente, kodwa ngokuqhelekileyo kubandakanya amagama kunye nobudala bezingane ezihlala ekhaya, idilesi yekhaya kunye nesayineli yomzali.
Iiyure zokufundisa : ezininzi iinkalo zichaza inani leeyure kunye / okanye iintsuku ngonyaka apho abantwana befanele bafumane imfundo. Abanye, njenge-Ohio, bathetha iiyure ezili-900 zemfundo ngonyaka. Abanye, njengeGeorgia, bachaza iiyure ezine neyesigamu ngosuku ngeentsuku eziyi-180 ngamnye wesikolo.
Iphothifoliyo: Ezinye iindawo zinikeza inketho yephothifoliyo endaweni yovavanyo oluchanekileyo okanye uvavanyo lwengcali. Iphothifoliyo yimiqoqo yamaphepha achaza inkqubela yomfundi ngamnye kunyaka wesikolo. Ingabandakanya iirekhodi ezifana nokuhamba, amabakala, izifundo ezigqityiweyo, iisampula zomsebenzi, iifoto zeeprojekthi, kunye neemvavanyo zokuvavanya.
Ubume kunye nokulandelelana : Uluhlu kunye nokulandelelana luhlu lwezihloko kunye neengcinga eziza kufundwa ngumfundi kulo nyaka wesikolo. Ezi ngcamango zivame ukuphulwa phantsi kwinqanaba lemfundo kunye nebanga.
Uvavanyo olumiselweyo : Amazwe amaninzi afuna ukuba abafundi basekhaya basekhaya bathathe iimvavanyo eziqhelekileyo eziqhelekileyo ngezikhathi eziqhelekileyo. Iimvavanyo ezihlangabezana neemfuno zelizwe ngalinye ziyahluka.
Izikolo ze-Umbrella / izikolo ezizikhuphayo : Ezinye iindawo zinika ithuba lokuba abafundi basekhaya bafunde kwi-ambulula okanye zikhusele isikolo. Le nto ingaba isikolo samabanga abucala okanye nje umbutho osungulwe ukusiza iintsapho zasekhaya zasemakhaya zihambelana nemithetho kwilizwe labo.
Abafundi bafundiswa ekhaya ngabazali babo, kodwa isikolo sokugcina isikolo sigcina iirekhodi zabafundi ababhalisile. Iirekhodi ezifunwa zizikolo ezikhutshwayo ziyahlukahluka ngokwemiqathango yombuso apho ikhona. La maxwebhu angeniswa ngabazali kwaye angabandakanya ukuhamba, amanqaku okuvavanya kunye namabakala.
Ezinye iisambulela izikolo zibanceda abazali bakhethe ikharityhulam baze banikele imibhalo, idiploma kunye nemikhosi yokugqiba.
Amazwe kunye neMithetho yeMigangatho yasekhaya yaseMakhaya
Amazwe amaninzi acingelwa ukuba alawulwa kakhulu kwiintsapho zasemakhaya zibandakanya:
Ngokuqhelekileyo kuthathwa njengeli lizwe elilawulwa kakhulu, imithetho yasekhaya yaseNew York ifuna ukuba abazali baphendule isicwangciso somyalelo ngamnye somfundi ngamnye. Esi cwangciso kufuneka sibandakanye ulwazi olunjengegama, ubudala, kunye nezinga lokufunda lomfundi; ikharityhulam okanye iincwadi zezifundo ofuna ukuzisebenzisa; kunye negama lokufundisa umzali.
Urhulumente ufuna uvavanyo oluqhelekileyo lwangonyaka apho abafundi kufuneka babe khona okanye ngaphezulu kwe-percentile yama-33 okanye babonise ukuphuculwa kwezinga elipheleleyo kunyaka odlulileyo. INew York nayo ibhala izifundo ezithile abazali abafanele bafundise abantwana babo kumazinga ahlukeneyo ebakala.
I-Pennsylvania, elinye ilizwe elilawulwa kakhulu, linikeza iindlela ezintathu zokuhlala ekhaya. Ngaphantsi komthetho wesikolo, bonke abazali mabahambise i-affidavit yabhaliswa kwizindlu zasemakhaya. Le fom ibandakanya ulwazi malunga nokugonywa kunye neirekhodi zezokwelapha, kunye neengxelo zecaleni lobugebengu.
Umzali wasekhaya wasekhaya uMalena H., ohlala ePennsylvania, uthi nangona uhulumeni "... uthathwa njengenye yelizwe kunye nemimiselo ephezulu ... ayikho into embi. Kuyavakala kakhulu xa uva malunga nazo zonke iimfuno, kodwa emva kokuba wenze oko kanye xa kunzima kakhulu. "
Uthi, "Kwisithathu, kwibanga lesihlanu nelesibhozo umfundi kufuneka athathe uvavanyo olumgangatho. Kukho iintlobo ezinokukhetha kuzo, kwaye banokwenza ezinye zazo ekhaya okanye kwi-intanethi. Kumele ugcine iphothifoliyo kumntwana ngamnye onesampula ezimbalwa kwisifundo ngasinye esifundiswayo kunye neziphumo zovavanyo olufanelekileyo ukuba umntwana unomnye wokuvavanya iminyaka. Ekupheleni konyaka, ufumana umvavanya ukuphonononga iphothifoliyo kwaye usayine kuyo. Emva koko uthumele ingxelo yomhloli kwisithili sesikolo. "
Nangona amaninzi amazwe efuna ukuba imfundiso yokuba ngumzali ubuncinane idiploma yesikolo esiphakamileyo okanye i-GED, abanye, njengeNorth Dakota, bafuna ukuba umzali wokufundisa unesidanga sokufundisa okanye uhlolwe ubuncinane ubuncinane iminyaka emibini ngumfundisi oqinisekisiweyo.
Le nyaniso ibeka eNyakatho Dakota kwiluhlu lwabo babecingwa ngokukodwa ngokumalunga nemithetho yabo yasekhaya. Ezi ziquka:
I-North Carolina idla ngokubhekisele kwiimeko ezilukhuni kwiindawo zasemakhaya. Kudinga ukugcina ukuhamba kunye neirekhodi zokugonywa komntwana ngamnye. I-North Carolina idinga ukuba abantwana bazalise iimvavanyo eziqhelekileyo zesizwe ngamnye ngonyaka.
Ezinye iimeko ezilawulwa ngokwemilinganiselo ezifuna ukuhlolwa okusemgangathweni ngonyaka ziquka iMaine, iFlorida, iMinnesota, i-New Hampshire, i-Ohio, iSouth Carolina, iVirginia, iWashington, ne-West Virginia. (Ezinye zala mazwe zinikezela ezinye iindlela zokufunda zasemakhaya ezingenakufuna iimvavanyo zonyaka.)
Amaninzi amaninzi anika ukhetho olungaphezulu kweyodwa ukuya kumakhaya asekhaya. U-Tennessee, umzekelo, okwangoku unokukhetha ezintlanu, kubandakanywa izinketho zezikolo zeesambulela kunye kunye nokufunda okude (kwiikholeji ze-intanethi).
UHeather S., umzali wasekhaya wase- Ohio , uthi abantwana base-Ohio basekhaya kufuneka bangenise ileta yonyaka yenjongo kunye nesishwankathelo sekharityhulam yabo ejoliswe kuyo, kwaye bavumele ukugqiba iiyure eziyi-900 zemfundo ngamnye ngonyaka. Emva koko, ekupheleni konyaka ngamnye, iintsapho "... .nokwenza uvavanyo oluvunyiwe nguburhulumenteni okanye ube neepotfoliyo zihlaziywe kwaye zingenise iziphumo ..."
Abantwana kufuneka bavavanye ngaphaya kwe-25 percentile kwiimvavanyo ezimiselweyo okanye ukuqhubela phambili kwintlalothifoliyo.
Umama waseViginia wasekhaya waseVirginia, u-Joesette, ucinga ngemithetho yakhe yasekhaya yasekhaya yokulula. Uthi abazali kufuneka "... bafake iSaziso soMnqweno ngamnye ngonyaka ngo-Agasti 15, banikezele into ebonisa inkqubela phambili ekupheleni konyaka (ngo-Agasti 1). Oku kungaba uvavanyo olulinganiselweyo, ukulinganisa ubuncinane kwi-4 stanine, iphothifoliyo [yomfundi] ... okanye incwadi yokuvandlakanywa ngumhloli ovunyiweyo. "
Ngenye indlela, abazali baseVirginia banokufakela ukuxolelwa kweNkolo.
Amazwe aneMithetho yeMigangatho yasekhaya yaseMakhaya
Izizwe ezilishumi elinesithandathu zase-US zibhekwa njengemithintelo encinci. Ezi ziquka:
IGeorgia idinga iSibhengezo seNjongo soNyaka sokuThumela iSeptemba 1, ngonyaka, okanye emva kweentsuku ezingama-30 ukusuka mhla uqala ukuqala ekhaya. Abantwana kufuneka bathathe uvavanyo oluqhelekileyo lwesizwe ngamnye kwiminyaka emithathu ukususela kwi-3 bakala. Abazali kufuneka babhale ingxelo yenkqubela yonyaka ngamnye kumfundi ngamnye. Zomibini iziphumo zokuvavanya kunye neengxelo zenkqubela phambili mazigcinwe kwifayile kodwa azifunwa ukuba zingeniswe kunoma ngubani.
Nangona i-Nevada iluhlu oluyimimiselo elincinci, uMagdalena A., ohlala emakhaya asekhaya abantwana bakhe bathi, "... ikhaya lekhaya leparadesi. Umthetho uchaza umyalelo owodwa: xa umntwana ejika ezisixhenxe ... isaziso sesinjongo kumakhaya esikolweni kufuneka sifakwe. Oko kunjalo, ngenxa yobomi baloo mntwana. Akukho ziphothifoliyo. Akukho zi-check-ups. Akukho vavanyo. "
Umama waseCalifornia ekhaya lomama, u-Amelia H. uchaza iimeko zokuhlala ekhaya. "(1) Inketho yokufunda ekhaya kwikomiti yesikolo. Izinto eziphathekayo zinikezelwa kwaye kufuneka zitshekishwe rhoqo ngeveki okanye ngenyanga. Ezinye izithili zibonelela iiklasi zokufundela abantwana kunye / okanye avumele abantwana ukuba bathathe iiklasi kwiikampus.
(2) izikolo zesiKharityhulam. Ngamnye uhlelwa ngokwahlukileyo kodwa bonke bafumana amakhaya asekhaya kwaye banike inkxaso ngemali yekharityhulam yelizwe kunye nemisebenzi yecandelo leemveliso ngokusebenzisa iinkonzo zabathengi ... Abanye bafuna ukuba abantwana bahlangabezane nemigangatho karhulumente; abanye bacela nje iimpawu 'zokukhula kwexabiso elongezelelweyo.' Uninzi lufuna uvavanyo lwamazwe kodwa i-handful iya kubavumela abazali ukuba bavelise iphothifoliyo njengophando lokuphela konyaka.
(3) Fayile njengeziko elizimeleyo. [Abazali kufuneka] bathethe iinjongo zekharityhulam ekuqaleni konyaka wesikolo ... Ukufumana idiploma yesikolo esiphakamileyo ngokusebenzisa le ndlela kuyinkathazo kwaye abazali abaninzi bakhetha ukuhlawula umntu ukuba ancede ngamaphepha. "
Amazwe kunye neMithetho eLawulayo yasekhaya yaseMakhaya
Ekugqibeleni, amazwe alishumi elinanye abhekwe njengabanobuhlobo bezindlu zasemakhaya kunye nezithintelo ezimbalwa kwiintsapho zasemakhaya. Ezi zilandelayo:
I-Texas iyayiqaphela ukuhlalisana kwezindlu zasemakhaya kunye nezwi elinamandla lamakhaya kwi-legislative level. Umzali wasekhaya wase-Iowa, uNichole D. uthi ikhaya lakhe lilula nje. "[E-Iowa], asikho migaqo. Akukho vavanyo likarhulumente, akukho zicwangciso zesifundo ezifakiwe, akukho maxwebhu okuhamba, akukho nto. Asinakuze sixelele isithili ukuba sihlala ekhaya. "
Umzali uBethany W. uthi, "UMissouri unobungane bekhaya. Azikho izithili zokuzisa okanye nabani na ngaphandle kokuba umntwana wakho ngaphambili efundiswa zikarhulumente, akukho vavanyo okanye ukuvavanywa. Abazali bagcina iiyure (iiyure eziyi-1, iintsuku ezingama-180), ingxelo ebhaliweyo yenkqubela phambili, kunye neesampula ezimbalwa zabasebenzi [zabafundi babo]. "
Ngaphandle kwemibandela embalwa, ubunzima okanye ukulungelelana kokuthobela imithetho yezindlu zasekhaya zasekhaya zizithoba. Kumazwe athathwa njengoluhlu oluphezulu, abazali bezindlu zasemakhaya bavame ukuba ukuthotyelwa kona kunzima njengoko kubonakala kwiphepha.
Enoba ucinga ngemimiselo yelizwe lakho lemimandla yeemfuno zezemfundo okanye imbeko, kubalulekile ukuqinisekisa ukuba uyaqonda into efunekayo kuwe ukuba uhlale uhambelana. Eli nqaku kufuneka liqwalaselwe njengesikhokelo kuphela. Imithetho ethile ecacileyo yoluntu, nceda ukhangele iwebsite yeqela leenkxaso-mali kwikhaya lakho okanye kwi-Homeschool Legal Defense Association.
Izakhono zeeKhaya zaseKhaya kufuneka ziphuhliswe phambi koKholeji
I-10 yeBloodestest, Iimfazwe ezininzi zeMfazwe zoBundlobongela
Ukuhamba ngeCandelo loLuntu lweSahluko seBhalance
Yintoni Eyona Eyona Eyona Eyona Mandla